शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजा गरे घरमा धनका साथै समृद्धि लाभ हुने…! – Khabar PatrikaNp
शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजा गरे घरमा धनका साथै समृद्धि लाभ हुने…!
Prevझन् कडा, कुलमानको पक्षमा जागे जनता ! बीच सडकमै हेर्नुस – प्रहरीलाई पर्यो आपत (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextराष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालको नया र पहिलो भिडिओ “यो कर्म भुमीको आगनमा” सार्बजनिक…! (भिडियो हेर्नुहोस)
‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई सर्प पालन उत्पादन गर्न ७२ करोड अनुदान !
ढाड दुखेको खण्डमा दुखाइ कम गर्न कपुर आयुर्वेदिक प्रयोजनमा प्रयोग
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (30999)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15277)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13524)
जान्नुहाेस, निलो दाग बो क्सी ले रग त चुसेर देखिएकाे हाे त ?
नोबेल अस्पतालले टा’उको शल्यक्रिया भन्दै पेट चि’र्‍यो, चितामा श’व राख्दा आफन्तले थाहा पाएपछि…